NightWare ichave App yeApple Watch iyo inokubatsira iwe nehusiku | Ndinobva mac
NightWare ichave App yeApple Watch iyo inokubatsira iwe nehusiku
Kuti iyo Apple Watch chishandiso chinopfuura kungotarisa wachi, ndechimwe chinhu icho isu tese tanga tichitoziva. Kwenguva yakati rebei akapinda mune zvekurapa uye akabatsira vanhu vazhinji nekuda kweECG yake, kudonha kuonekwa, zviyero zve oxygen yeropa uye yakareba etc. Zvino nekuda NightWare Iwe unozokwanisa kudzikisira hope dzehusiku dzevanhu vese avo vanovatambura nguva zhinji.
NightWare chirongwa chinongogona kushandiswa nemushonga chete
NeChishanu, United States Chikafu neDrug Administration (FDA) yakabvumidza kushambadzira kwechigadzirwa chitsva chakanangidzirwa ku kuderedzwa kwenguva pfupi mukukanganisa-kwakanangana nehusiku kurara. Inogona chete kushandiswa neyekunyorerwa uye chete muvakuru vane makore makumi maviri nemaviri ekuberekwa kana kupfuura. vanotambura nedambudziko rekurota kana vanorota hope dzinotyisa dzepashure pekushungurudzika mupfungwa (PTSD). Chigadzirwa chinopa kudekara zvinyoronyoro kuburikidza nekubata kunoenderana nekuongororwa kweyekurova kwemoyo uye kufamba panguva yekurara.
Carlos Pena, Ph.D., director weHofisi yeNeurological uye Physical Medicine Zvishandiso kuCentre for Devices uye Radiological Hutano kubva kuDFA, ataura:
Kurara chikamu chakakosha chemuitiro wezuva nezuva wemunhu. Zvisinei, vamwe vanhu vakuru vane chirwere chinotyisa kana vanoona zvinotyisa kubva kuPTSD havagoni kuwana zororo ravanoda. Mvumo yanhasi inopa sarudzo nyowani ku kurapwa kwakaderera-njodzi uchishandisa tekinoroji yedhijitari mukuyedza kuwanisa kurerukirwa kwechinguva kubva mukukanganisa-kurara kwakanangana nehope.
Anwendung akagamuchira "Advance mudziyo" zita. Iyi inzira yakagadzirirwa kukwiridzira kusimudzira uye kuongorora kwe Hardware uye masevhisi ayo anogona kupa kurapwa kwakaringana kana kuongororwa kweanotyisidzira hupenyu kana zvirwere zvisingadzoreke kana mamiriro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » NightWare ichave App yeApple Watch iyo inokubatsira iwe nehusiku
"Chimwezve chinhu" Chiitiko chekupedzisira cheApple chegore rino 2020 chinotanga
Batanidza kuchengetedza app GoodLinks inowedzera rutsigiro rweMacOS Big Sur uye iyo nyowani Apple Silicon